“Condense of Composition” ဝါကျဖွဲ့ထုံးအနှစ်ချုပ် အပိုင်း - ၃ (Clauses) - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home English Lesson Lesson “Condense of Composition” ဝါကျဖွဲ့ထုံးအနှစ်ချုပ် အပိုင်း - ၃ (Clauses)
“Condense of Composition” ဝါကျဖွဲ့ထုံးအနှစ်ချုပ် အပိုင်း - ၃ (Clauses)
Maung Pauk at 7:08:00 PM English Lesson, Lesson,
3. Clauses (ဝါကျခွဲ)
ဝါကျ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကတ္တား (Subject) နှင့် ကြိယာ (Verb) ပါဝင်သောလည်း အဓိပ္ပာယ် မပြည့်စုံသော စကားစုကို Clauses ဟုခေါ်ပါသည်။ Clause တွင်လည်း တည်ရှိသည့်နေရာ အပေါ်မူတည်ကာ (၃) မျိုးရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ -
1) Noun Clause
2) Adjective Clause
3) Adverb Clause
Noun Clause [S, O, C]
who, that, what, how, when, where စသည်ကဲ့သို့သော စကားဆက်များ တစ်ခုခု ဝါကျခွဲ(Clause)၏ ရှေ့ဆုံးတွင် ရှိတတ်ပြီး အနက်ကောက်ရာတွင် Phrase ကဲ့သို့ပင် Subject နေရာအတွက် “သည် (ဆိုတာ)”၊ Object နေရာအတွက် “ကို၊ (ဆိုတာကို) ”၊ Complement နေရာအတွက် “သည်” ဟု အဓိပ္ပာယ် ကောက်ပါသည်။ ဥပမာ -
That the match will be cancelled is now certain.
Noun Clause (S)
ပြိုင်ပွဲ ဖျက်မယ် ဆိုတာ အခု သေချပြီ။
I know that the match will be cancelled.
Noun Clause (O)
ပြိုင်ပွဲဖျက်မယ် ဆိုတာကို ငါသိတယ်။
Whether he has singed the contract doesn’t matter.
စာချုပ်ကို သူလက်မှတ်ထိုးပြီးပြီလား/ မထိုးရသေးဘူးလား ဆို ပြဿနာ မဟုတ်ပါ။
I want to know whether he has singed the contract.
စာချုပ်ကို သူလက်မှတ်ထိုးပြီးပြီလား/ မထိုးရသေးဘူးလားဆိုတာကို ငါသိချင်တယ်။
When he did it isamystery.
N Clause (S)
ဘယ်အချိန်မှာ အဲဒါကို သူလုပ်ခဲ့တာ ဆိုတာသည် သိဖို့ခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်။
I wonder when he did it.
N Clause (O)
အဲဒါကို သူဘယ်အချိန်လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို ငါသိချင်တယ်။
When he comes depends on your decision.
သူဘယ်အချိန်လာမယ် ဆိုတာသည် မင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ်တွင် မူတည်သည်။
မင်းဘယ်သူလဲ ဆိုတာကို ငါသိတယ်။
Let me know how he comes back.
သူဘယ်လို ပြန်လာမလဲ ဆိုတာကို ငါသိပါရစေ။
Adjective Clause [ only after noun]
who, that, which, whose ကဲ့သို့သော relative conjunction များကို Clause ၏ ရှေ့တွင် ရှိပြီး Noun ၏ အနောက်တွင်နေကာ Adjective နာမဝိသေသန အလုပ်ကို လုပ်သည်။ အဓိပ္ပာယ်ကို “သော” ဖြင့် ကောက်ရပါသည်။ ဥပမာ-
The government which promises to cut the taxes will be popular.
အခွန်လျော့ရန် ကတိပြုသော အစိုးရသည် လူကြိုက်များလိမ့်မည်။
Mg Mg is the man who lives my next door.
ကျွန်တော့်နှင့် ကပ်လျှက်အခန်းတွင်နေသော သူသည် မောင်မောင် ဖြစ်သည်။
He is the man whose car was stolen.
ကားအခိုးခံရသော လူသည် သူဖြစ်သည်။
A doctor examined the astronauts who returned from the space today.
ယနေ့ အာကာသမှ ပြန်လာသော လေသူရဲကို ဆရာဝန်က စစ်ဆေးသည်။
The millionaire whose son ran away form homeaweek ago has madeapublic appeal.
လွန်ခဲ့သည့် တစ်ပတ်လောက်က သူ့သား အိမ်မှ ထွက်ပြေးသွားသော သန်းကြွယ်သူဌေးကြီးက ပြည်သူများကို မေတ္တာရပ်ခံလိုက်သည်။
Clause ၏ ရှေ့က အထူးပြုခြင်းခံရသော Noun သည် Clause ၏ Object ဖြစ်နေလျှင် Clause တွင်ပါသော စကားဆက်(Conjunction)ကို ဖြုတ်ကာ ရေးနိုင်သည်။ ဥပမာ-
This is the photo that/ which I took.
ငါ ရိုက်ထားသောဓါတ်ပုံသည် ဤဟာ ဖြစ်သည်။
ဤဝါကျတွင် အထူးပြုခြင်းခံရသော Noun ဖြစ်သည့် phot သည် နောက်က အထူးပြုသော Clause ၏ Object ဖြစ်နေသောကြောင့် စကားဆက် (Conjunction) “that/ which” ကို ဖြုတ်ကာ အောက်ပါအတိုင်းရေးနိုင်သည်။
This is the photo I took.
v Adjective Clause များတွင် Conjuction ၏ ရှေ့တွင် တစ်ခါတစ်ရံ Preposition များ တွဲပါတတ်ပါသည်။ “သော” ဖြင့်သာ အနက်ကောက်ရပါမည်။ ဥပမာ -
The person to whom I complained is the manager.
ကျွန်တော် မကျေနပ်ကြောင်းသွားပြောသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် မန်နေဂျာဖြစ်သည်။
This is the pan in which I boiled the milk.
ကျွန်တော် နွားနို့ကျိုသော အိုးသည် ဤဟာဖြစ်သည်။
Ø Adjective Clause သည် time, place နှင့် reason များကိုလည်း အထူးပြုနိုင် ပါသည်။
1979 was the year in which my son was born.
ကျွန်တော့်သားမွေးသော နှစ်သည် ၁၉၇၉ ခုနှစ် ဖြစ်သည်။
This is the place in which I grew up. [in which= where]
ကျွန်တော် အရွယ်ရောက်ခဲ့သော နေရာသည် ဤနေရာ ဖြစ်သည်။
Adverb Clause [M, P, T, R, P, C, C, Q]
Adverb Phrase တွင် ပုံသေ နေရာ အတိအကျမရှိသကဲ့သို့ Adverb Clause တွင်လည်း ပုံသောနေရာအတိအကျ မရှိပါ။ သို့ရာတွင် လုပ်ဆောင်ချက် အပေါ်တွင် မူတည်ကာ Adverb Clause ကို အခြေခံအားဖြင့် ၉ မျိုးတွေ့နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ -
Adverb Clause of Manner [M]
- Type this again as I showed youamoment ago.
ခုနက ငါပြထားတဲ့အတိုင်း ဒါကို ပြန်ရိုက်ပါ။
as - အတိုင်း/ သလို
how/ the way - အတိုင်း/ သလို
the way in which - အတိုင်း/ သလို
in the same way - ဤနည်းအတိုင်း
as if - ဘိသကဲ့သို့
as though - ဘိသကဲ့သို့
Adverb Clause of Place [P]
You can’t live where you like.
wherever - ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်
anywhere - မည်သည့်နေရာမဆို
everywhere - နေရာတကာ
Adverb Clause of Time [T]
Tell him as soon as he arrives.
သူရောက်ရင် ရောက်ခြင်း သူ့ကို ပြောလိုက်ပါ။
as soon as - လျှင် … လျှင်ခြင်း
when - သောအခါ
after - ပြီးနောက်
as - စဉ်တွင်
as long as - လျှင်
before - မတိုင်မီ
by the time - အဲဒီအချိန်လောက်မှာ (when)
during - အတောအတွင်း
once - ဆိုရင်ပဲ
since - ကတည်းက
no sooner than - လျှင် …… လျှင်ခြင်း
until/ till - တိုင်အောင်
whenever - ဘယ်အခါပဲဖြစ်ဖြစ်
while - စဉ်တွင်
Once you’re seen one penguin, you’ve seen them all.
ပင်ဂွင်းတစ်ကောင်းကို မြင်ဖူးတယ် ဆိုရင်ပဲ ခင်ဗျား အကုန်မြင်ဖူးတာပဲပေါ့။
You can keep these records as long as you like.
ခင်ဗျားသဘောကျလျှင် ဒီဓါတ်ပြားကို သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
Adverb Clause of Reason [R]
As/ Because/ Since there was very little support, the strike was not successful.
ထောက်ခံမှု အနည်းငယ်သာရသောကြောင့် သပိတ်သည် မအောင်မြင်ပါ။
Mg Hla doesn’t come today because he is not feeling well.
နေမကောင်းသောကြောင့် မောင်လှ ဒီနေ့ မလာပါ။
seeing that = သောကြောင့်
for = သောကြောင့်
Adverb Clause of Purpose [P]
ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြသော စကားဆက်များဖြစ်သော ‘စေရန်’ ၊ ‘အလို့ငှာ’ ၊ ‘စိုးလို့’ ဟုအနက်ရသော စကားဆက်များဖြစ်သည့် so that, in order that, in case, lest and fear that တို့ဖြင့်ရေးသားသော Clauses များဖြစ်သည်။ ဥပမာ -
I’ve arrived early so that I will getagood view.
မြင်ကွင်းကောင်းကောင်းရ စေရန် ငါ စောစောရောက်တယ်။
I arrived early so as not to miss anything.
ဘယ်အရာမှ လက်မလွတ်သွားစေရန် အလို့ငှာ ငါ စောစောရောက်သည်။
in case, lest, for fear that အဆိုပါစကားဆက်များသည် ‘စိုးလို့’ ဟု အနက်ရပါသည်။
I asked them to ring first lest we were out.
ငါတို့အပြင်ရောက်နေမှာ စိုးလို့ အရင်ဖုံးဆက်ဖို့ သူတို့ကို မှာထားတယ်။
Adverb Clause of Conditional [C]
အခြေအနေပြ စကားဆက်များပါသော Clauses များဖြစ်သည်။ ဥပမာ -
If the rain stops, we’ll be able to go forawalk.
အခြေအနေပေး စကားဆက်များ နှင့် ပတ်သက်၍ ‘if’ အကြောင်းကို အနည်းငယ် တင်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။ အကျယ်ကို သိလိုပါလျှင် အလွန်များပြားသောကြောင့် သီးသန့် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရေးမှသာ ပြည့်စုံပါလိမ့်မည်။ ဤ Adverb Clause of Conditional ကဏ္ဍတွင် စာဖတ်သူများ မြန်မာ ပြန်ဆိုရာတွင် လွယ်ကူစေရုံသာ တင်ပြသွားပါမည်။
‘if’ ကို အခြေခံအားဖြင့် ပုံစံ (၃) မျိုးတွေ့နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ -
1. If + S + present, S + will + v.
If I lose my job, I will go abroad.
အလုပ်မရှိရင် ငါ နိုင်ငံခြားသွားမယ်။
2. If + S + past, S + would + v.
If I lost my job, I would go abroad.
ငါသာ အလုပ်မရှိခဲ့ရင် နိုင်ငံခြားသွားမှာ။
(အခု အလုပ်ရှိတယ် သွားဖို့ မလိုပါ။)
3. If + S + had+ past participle, S + would have + past participle.
If I had lost my job, I would have gone abroad.
အလုပ်သာမရှိရင် ငါ နိုင်ငံခြားသွားကောင်း သွားရမယ်။
(အလုပ်လည်းရှိ၊ လစာလည်းကောင်း၍ သွားရန် ဖြစ်နိုင်ခြေ မရှိသလောက် အခြေအနေကို ပြသည်။)
‘if’ ကို ‘ရင်’ ၊ ‘လျှင်’ ဖြင့်သာ အဓိပ္ပာယ် ကောက်ရပါသည်။
ဖော်ပြပါ ပုံစံ (၃) မျိုးမှ ခွဲထွက်လာသော ပုံစံကွဲများ များစွာရှိပါသည်။ ၎င်းတို့အနက်မှ စာဖတ်သူ အခက်အခဲ ဖြစ်စေနိုင်သော ပုံစံကို အနည်းငယ် တင်ပြပါမည်။
If + should
If he should call, tell him I’ll ring back.
သူဖုံးခေါ်ရင် ငါ ပြန်ဆက်မယ်လို့ ပြောလိုက်။
အထက်ပါပုံစံ If + should ကို If ဖြုတ်ကာ ရေးနိုင်ပါသည်။
Should he call, tell him I’ll ring back. (အဓိပ္ပာယ်အတူတူပင် ဖြစ်ပါသည်။)
Imperative + Conjunction + Clause
အမိန့်ပေး/ ခိုင်းစေ + စကားဆက် + ဝါကျခွဲ
(အနက်ကောက်သောအခါ ‘လျှင်’ ဖြင့်သာ ကောက်ရမည်။) ဥပမာ -
Fail to pay and, they’ll cut off the electricity.
ငွေပေးဖို့ ပျက်ကွက်လျှင် သူတို့ကို မီးဖြတ်လိမ့်မယ်။
Tell us what to do and, we’ll get on with it.
ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ပြောရင် ကျွန်တော်တို့ ဆက်လုပ်မှာပေါ့။
Stop eating sweets, or you won’t get any dinner.
အချိုတွေစားတာ မရပ်ဘူးဆိုရင် မင်း ညစာစားလို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
Takeataxi, or you will miss the train.
အငှားယဉ် မခေါ်ဘူးဆိုရင် မင်း ရထားလွတ်သွားလိမ့်မယ်။
If + were to + would
If the government were to cut tax, price would fall.
အစိုးရကသာ အခွန်လျှော့ရင် ဈေးကျမှာ။ ( အစိုးရက အခွန်မလျှော့)
၎င်းဝါကျကို ‘if’ ဖြုတ်ကာ were ရှေ့ထုတ်ပြီးရေးနိုင်ပါသည်။ (အဓိပ္ပာယ်တူပါသည်။)
Were the government to cut tax, price would fall.
Had + S + Past Participle
မူရင်းပုံစံ (၃) – If + S + had + Past Participle ကို ‘if’ ဖြုတ်ပြီး ရေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ( အဓိပ္ပာယ် အတူတူပင် ဖြစ်သည်။) ဥပမာ -
Had the management acted sooner, the strike wouldn’t have happened.
အုပ်ချုပ်ရေးဌာနက အလျှင်အမြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့လျှင် သပိတ်တိုက်ပွဲ ဖြစ်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ( အုပ်ချုပ်ရေးဌာနက ဘာမှ မဆောင်ရွက်ခဲ့)
‘If’ နှင့် အနက်တူသော စကားဆက်များ
assuming that - လျှင်
even if - ဆိုရင်တောင်မှ
if only - သို့မှသာ
on the condition that - လျှင်
provided/ providing that - လျှင်
so long as - လျှင်
if not/ unless - မဟုတ်ဘူးဆိုရင်
suppose that - လျှင်
supposing that - လျှင်
what if - ဆိုရင်ကော
say - ဆိုရင်ကော
if so - ဒီလိုဆိုရင်
in that case - ဒီလိုဆိုရင်
then - ဒီလိုဆိုရင်
အထက်ပါ စကားဆက်ပုံစံများအတွက် နမူနာ ဝါကျ အနည်းငယ် တင်ပြပါမည်။
What if/ Say he gets home before us and can’t get in?
သူ ကျွန်တော်တို့ အရင်အိမ်ရောက်နေရင်ကော သူအိမ်ထဲဝင်နိုင်ပါ့မလား။
He may be busy, if so, (in that case) I’ll call later.
သူအလုပ်များနိုင်တယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ကျွန်တော်နောက်မှ ပြန်ဆက်လိုက်မယ်။
‘if’ အစားသုံးသော အခြားပရိယာယ်များ
With luck, we’ll be there by tomorrow.
ကံကောင်ရင်တော့ မနက်ဖြန် ကျွန်တော်တို့ ရောက်လိမ့်မယ်။
Give time, they’ll probably agree.
သူတို့ကို အချိန်ပေးမယ်ဆိုရင် သူတို့ သဘောတူမှာပါ။
To hear him talk, you’d think he wasaPrime Minister.
သူ့စကားသံကို ခင်ဗျားကြားလို့ရရင် သူ့ကို ဝန်ကြီးချုပ်လို့တောာင် ထင်မှာ။
Without you help, I couldn’t have done it.
ခင်ဗျားအကူအညီသာမရရင် အဲဒါ ကျွန်တော်လုပ်လို့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
In different circumstance, I would have said yes.
အခြေအနေသာ အပြောင်းအလဲရှိမယ်ဆိုရင် ဟုတ်ကဲ့ လို့ ကျွန်တော် ပြောမိမှာ။
Adverb Clause of Comparison [C]
နှိုင်းယှဉ်ပြ စကားဆက်များဖြစ်သော ‘သလောက်’ ၊ ‘ထက်’ ဟု အဓိပ္ပာယ် ရသော စကားဆက်များဖြစ်သည့် ‘as … as’, ‘more … than’, less …than’ တို့ဖြင့် ရေးသားထားသော Clauses များဖြစ်သည်။ ဥပမာ -
She is as beautiful as an actress.
မင်းသမီးတစ်ယောက် လှသလောက် သူ လှပါတယ်။
He is not so tall as his brother.
သူ့ညီ အရပ်ရှည်သလောက် သူ အရပ်မရှည်ပါ။
Airplane is faster than car.
ကားထက် လေယဉ်ပျံက ပိုမြန်တယ်။
The more you practise the better you get.
မင်းလေ့ကျင့်လေလေ ပိုကျွမ်းကျင်လေလေ ပဲ။
Adverb Clause of Contract [C]
ဆန့်ကျင်ဖက် အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်စေသော ‘သို့ပေမယ့်’ ၊ ‘သော်ငြားလည်း’ စသော စကားဆက်များဖြစ်သည့် although, considering that, though, even though, even if, much as …, while, where as, how ever much/ badly/ good, no matter how စသည်တို့ဖြင့် ရေးသားထားသေ Clause များဖြစ်သည်။ ဥပမာ -
Although he works hard, he doesn’t get success.
သူ ကြိုးစားပေမယ့် အောင်မြင်မှု မရဘူး။
I intend to go to Bagan, even if bus fares goes up again.
ကားခ တက်သွားပေမယ့် ပုဂံကို သွားဖို့စိတ်ကူးတယ်။
Much as I’d like to help, there isn’talot I can do.
ကျွန်တော် ကူညီချင်ပေမယ့် အများကြီးတော့ မတတ်နိုင်ဘူး။
Adverb Clause of Qualification [Q]
အကျိုးပြ စကားဆက်များဖြစ်သော ‘လောက်အောင်ကို’ ဟု အနက်ရသည့် ‘so … that’, ‘such … that’ စသည့် တို့ဖြင့်ရေးသော Clauses များဖြစ်သည်။ ဥပမာ -
His reactions are so quick that no one can match him.
သူ့ကို မည်သူမျှ မယှဉ်နိုင်လောက်အောင်ကို သူ့တုန့်ပြန်မှုများက မြန်ဆန်တယ်။
They are such wonderful players that no one can beat them.
ဘယ်သူကမှ သူတို့ကို မနိုင်လောက်အောင်ကို တော်သော အားကစားသမားများ ဖြစ်သည်။
Adverb Clauses များသည် အမျိုးအစား အများဆုံးနှင့် အသုံးအများဆုံး တွေ့ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်ကာ လေ့ကျင့်စေလိုပါသည်။
ဆရာကြီး ဦးမြကြိုင် ကိုယ်တိုင် သင်ကြားပို့ချမှုကို ဖော်ပြပါ link တွင် ကြည့်ရှု ဆည်းပူးနိုင်ပါသည်။
Credit to : အောင်ကိုဦး ( UMK )
English Lesson, Lesson
English Lesson Lesson
Zemana AntiLogger 1.9.3.454 Full
Stellar Phoenix Excel Recovery 4.1 Full
ကွန်ပျူတာရဲ့ USB Port တွေကို Removable Access Tool...
GiliSoft USB Stick Encryption v5.0 Full
Y210,Y210C,Y210S အားလုံးကို One Click နဲ့ Root လုပ...
OrangeLine Template For Blogger
Virtuale Template For Blogger
BINARY Template For Blogger
Sevim Template For Blogger
Samsung Galaxy Note 8.0 ToolKit နဲ့ Samsung Galaxy...
ပျက်နေတဲ့ CD/DvD တွေဆီက Data တွေကို ပြန်ယူပေးမယ့် ...
Blogger မှာ Comment တွေ ပေါ်အောင်လုပ်နည်း
Huawei Y210-0010 ( U8685D) ကို Root လုပ်နည်း
Samsung Ace Plus S7500 ကို Root လုပ်နည်း
Sony Xperia P ကို Root လုပ်နည်း
မိမိစက်မှာ တင်ထားတဲ့ Antivirus ကောင်းကောင်း အလုပ်လ...
“Condense of Composition” ဝါကျဖွဲ့ထုံးအနှစ်ချုပ် အ...
Condensed of Composition (ဝါကျဖွဲ့ထုံး အနှစ်ချုပ်)...
Windows မှာ နာရီ Alarm ထားချင်သူတွေအတွက် Atomic Al...
Windows 8 System Speed Booster 3.0.1.2 Free
Windows7Right Click Menu မှာ New Folder မပေါ်တြဲ့...
Windows7နဲ့ Windows 8 (64bit) မှာ PDF ဖိုင်တွေကိ...
Samsung Galaxy S4 (GTI9500) ကို Root လုပ်နည်း
Huawei U8951(G510-0010) Build Number B165-168 နဲ့စ...
Huawei Y210C ကို Root လုပ်နည်း
Samsung Galaxy S Plus GT-I9001 ကို Root လုပ်နည်း
အလန်းစား မော်ဒယ်လ်များ မိမိ Desktop မှာ သီချင်းဆို...